Urur u hadla dhalinyarada ku jirta xabsiyada Canada oo lacag loogu aruuriyay magaalada Ottawa, sawiro – Mogadishutimes
Photo by Liban Dirie/MogadishuTimes
Xaflad lacag loogu aruurinayay urur u hadla dhalinyarada Soomaalida ee ku jirta xabsiyada wadanka Canada ayaa lagu qabtay magaalada Ottawa. Canadian-Somali Mothers Association waxaa aas aasay xubina ka ah hooyooyin Soomaaliyeed oo caruurtooda ay ku jiraan xabsiyada Canada.
Ujeedada ururka ayaa ah sidii dhalinyarada looga badbaadin lahaa wadada u socota xabsiga, haddii ay xabsiga galaana looga warqabi lahaa, marka ay ka soo baxaana looga caawin lahaa sidii ay shaqo iyo waxbarasho ku heli lahaayeen.
Xaawo Shaafici oo aas aastay ururka ayaa ka hadashay ujeedada loo aas aasay. Waxay tilmaantay in dhalinyarada ay xabsiyada ku heestaan dhibaatooyin farabadan.
Hodan Aden oo u shaqeysa Ottawa Public Health ayaa waalidiinta kala hadashay sida loo garto marka ay dhalinyarada isticmaalaan maandooriyeyaasha qatarta ah. Waxay kaloo kala hadashay sida loo caawiyo marka ay maandooriyeyaasha ku sumoobaan.
Fowsia Abdulkadir oo la-taliye u ah ururka ayaa tilmaantay in system-ka wadanka Canada uu dhalinyarada ka dhigay dhibanayaal. Waxay sheegtay in ay jiraan dhalinyaro fiican haddana la kulma midab-takoor.